ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဆိုင်ကလုံး သတိပေးချက်
မုန်တိုင်း သတိပေးချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ မိုး/ဇလ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ အသိပေး ထားချက်အရာ Super အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလို့ ဆိုထားပါတယ်။
(၁) (၁၁-၁၀-၂၀၁၃) ရက် နံနက် (၆)နာရီအချိန် Eumetsat , JTWC Satops တို့ရဲ့ တိုင်းတာချက် အရ တွေ့ရတဲ့ ဂြိုဟ်တုတိမ်ပုံများအရ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ အနောက်မြောက်ဖက်ကို တဖြည်းဖြည်း ရွေ့လျှားရင်း နဲ့ အားပိုကောင်းလာနေ ပါတယ်။
(၂) (၁၁-၁၀-၂၀၁၃) ရက် နံနက် (၉)နာရီခွဲအချိန် JTWC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ TROPICAL CYCLONE 02B(PHAILIN)ဟာ အားပိုကောင်းလာပြီး အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးအဆင့်ကို
ရောက်ရှိလာနေပါတယ်။ အများဆုံးလေတိုက်နှုန်း 135 knots (162 mph) Gust speed: 165 knots (198 mph) ရှိနေပြီး ပင်လယ်ပြင် လှိုင်းအမြင့် (၅၂)ပေ အထိရှိနေပါတယ်။
TROPICAL CYCLONE 02B(PHAILIN)
Date and Time: (၁၁-၁၀-၂၀၁၃)၇က် နံနက်(၉)နာရီခွဲအချိန် (110300Z)
Position: Lat.: 15.8°N, Long.: 88.8°E
Movement: 290°,6knots
Maximum wave height: 52 feet
Wind speed: 135 knots (162 mph)
Gust speed: 165 knots (198 mph)
Maximum possible wind: 135 knots (13-10-2013,1200Z)
Gust 175 knots (13-10-2013, 1200Z)
ကမ်းဖြတ်မည့်နေရာ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သြရိဿကမ်းခြေ(Orissa Coast)
ကမ်းဖြတ်မည့်နေ့ရက်။ (၁၂-၁၀-၂၀၁၃) နေ့ခင်းပိုင်းမှစတင်ဖြတ်မည်။
မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့်။ (၃၅ ပေ မှ ၅၀ ပေခန့်)
မုန်တိုင်း၏ လမ်းကြောင်းအတွင်း သွားလာနေ ကြသော ရေယာဉ်များအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမား ပါတယ်။
Cyclone 02B(Phailin)ဟာ Super Cyclone အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။
Storm News Update
ကဏ္ဍ ဆိုင်ကလုံး သတိပေးချက်